रवीन्द्रसँगको भेट र विवाह – .:: Welcome to Saurahaonline.com
रवीन्द्रसँगको भेट र विवाह
दुवै विद्यार्थी आन्दोलनमा थियौं । उहाँ पोखरामा, म काठमाडौंमा । २०५० सालतिर उहाँ–मेरो देखादेख भयो । चिनजान भयो । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटीमा सँगै भयौं । म अखिलको महिला विभाग प्रमुख भएँ, उहाँ कोषाध्यक्ष । ११ जनाको सचिवालय बन्यो । हामी दुबैजना सचिवालयमा थियौं । काम गर्दै जाने सन्दर्भमा हामी नजिक भयौं । त्यो बेला विद्यार्थी आन्दोलनको सहयोद्धामात्रै थियौं । विस्तारै साथीहरूले कुरा चलाउन थाले । आन्दोलनबाटै एकअर्काको साथीमात्रै होइन, तिमीहरुको जोडी पनि मिल्छ भन्थे । साथीहरुबीच चर्चा भएको हामी दुबैले सुन्यौं ।
हामीले प्रेम गर्‍यौं । २०५६ सालमा विवाह भयो । पछिल्लो अवधिमा उहाँको बाल्यकालदेखिका साथी धनराज आचार्यले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । अरु साथीभाइले पनि उनीहरुको विवाह होस् भन्ने चाहन्थे । मेरो खुट्टामा समस्या थियो । भन्नेहरु भन्थे, ‘उनीहरुको प्रेम विवाहमा परिणत हुँदैन ।’ म पनि ठिकै छ नि त भन्थें । हामी एकअर्कालाई रचाउँथ्यौं । डेटिङ जाने, घुम्न जाने चाहिँ भएन । एक अर्कालाई आदर र सम्मान गथ्र्यौं । उहाँमा प्रेमप्रति समर्पण थियो ।
विवाह ठूलो कुरा होइन, एकअर्काबीच समर्पण र सम्मान ठूलो कुरा हो, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो । विवाह हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चिन्तित हुनु पर्दैन । एकअर्काले रेस्पेक्ट गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने कुरा हो । दुईबीचको समझदारी भए विवाह जहिले पनि हुन सक्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । मैले त्यति गहिरोसगँ बुझ्दिनथें, जति उहाँले प्रेमलाई फराकिलो तरिकाले हेर्नुहुन्थ्यो । अरुका कुरा सुनेर प्रभावित पनि भएँ हुँला भन्ने लाग्छ अहिले आएरचाहिँ । हाम्रो प्रेम अलिअलि अरुबाट प्रभावित भएजस्तो महसुस हुन्थ्यो विवाहपछि भन्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहिँ उहाँले ।
पारिकारिक कारण राजनीतिक चेत
बाल्यकालदेखि नै राजनीतिसँग नजिक भएँ । ७ कक्षा पढ्दादेखि नै अखिल भनेको केहो भन्ने बुझिसकेकी थिएँ । त्यो कारण मेरो दाइ (राजन भट्टराई) अखिलको नेता हुनुहुन्थ्यो । दाइबाटै म प्रभावित भएँ । पुलिस पक्राउ गर्न आउनेदेखि नै पञ्चायती व्यवस्था ठिक रहेनछ, बहुदलीय चाहिँदो रहेछ भन्ने बुझ्न थालेकी थिएँ ।
एलएलसी दिएर बसेका बेला ४६ सालको आन्दोलन चलिरहेको थियो । जब ४७ सालमा पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्न थालेपछि सक्रिय राजनीति थालेकी थिएँ । रवीन्द्र केन्द्रीय समिति सदस्य भइसक्नु भएको थियो । विवाहअघि अखिलको उहाँ महासचिव र म सचिव थिएँ ।
हामीकहाँ कस्तो चलन भने व्यक्तिगत कुरा पनि बढी चासो र चर्चा हुने । सचिवलायमा मेरो भोटले निर्णय यताउता हुन्थ्यो । निर्णायक भोट थियो । कहिले काहीँ उहाँको र मेरो भोट एकै ठाउँमा प¥यो भने चाहिँ आरोप लाग्ने । रवीन्द्रका कारण यसले यसो गरी भन्ठान्ने । यी कुराले मलाई एकखालको पीडा पनि भयो । मैले राजनीतिलाई जसरी लिएको थिएँ त्यस्तो त होइन रहेछ । यो राजनीतिले महिलालाई त्यसरी त लिँदोरहेनछ । महिलाका विचार हुन्छन्, दृष्टिकोष हुन्छन्, मुद्दा हुन्छन् अलि ठान्दो रहेनछ यो राजनीतिले । कहिले दाइसँग जोड्ने, कहिले प्रेमीसँग जोड्ने । मैले मन त पराउन पाएँ नि तर विचार त आआफ्नो हुन्छ नि त । महिलाको पनि स्वतन्त्र विचार छ भन्ने अलि नलिएको मैले महसुस गरें । म विद्यार्थी आन्दोलनमा नबस्दै राम्रो हुन्छ भनेर म अखिलको सचिव भएको ३ महिनापछि अखिल छोडेर अनेमा संघ गएँ ।
योगेशसँग सल्लाह गरेर अखिलबाट अनेमसंघ
अहिलभित्र बस्न अप्ठेरो महसुस भएपछि योगेश (भट्टराई) दाइसँग सल्लाह गरें । मैले योगेश दाइसँग भनेकी थिएँ, दाइ अब मैले अखिलको राजनीति नगर्ने भएँ । मेरो चरित्रमा सधैंभरि धाबा बोल्ने अवस्था बन्यो । मेरो स्वभाव फेरि अलि फरक थियो, म सहन सक्दिनँ ।
अखिल नेपाल महिला संघमा मैले कार्यालय सचिवको रुपमा काम थालें । त्यहाँ कार्यरत हुँदाहुँदै ब्याचलरको रिजल्ट आयो । उहाँले हुन्छ, पढ भन्नुभयो । अब मास्टर गर्छु भनेर लागें । योगेश दाइसँगै फेरि पनि सल्लाह गरें । मास्टर पढ्दापढ्दै विवाह भयो । विवाहपछि मास्टर डिग्री पढें । अबचाहिँ आर्थिक र पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि मचाहिँ फरक फिल्डमा जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो । मास्टर पास हुनेबित्तिकै २०५९ मै कलेजमा पार्टटाइम पढाउन थालिहालें ।
आफू देखेर अरुलाई हसाउने मान्छे
अध्यापनले मेरो आफ्नै पनि थुप्रै वृत्ती विकास भयो भने अर्कोतर्फ त्यहीबीचमा छोरो पनि हुर्किइहाले । उहाँचाहिँ योजना बनाएर चल्ने मान्छे हो । उहाँले जसरी कामको योजना बनाउनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै पारिवारिक योजना पनि बनाउनुहुन्थ्यो । यस्तो गरौं है, यो गर्दा के होला ? भनेर उहाँ सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो । बच्चाको योजना पनि त्यसरी नै भयो । २ वटा बच्चा रेखदेख गर्नमै पनि समय बित्दोरहेछ । त्यतिबेला ग्रामीण आदर्श र सगरमाथा कलेज पढाउँथें । त्यहीबीचमा मैले ती २ कलेज पनि छोडेर एउटा एनजिओमा काम थालें ।
उहाँ लेखा समितिको सभापति हुँदा मैले एनजिओको जागिर खाइरहेकी थिएँ । हामी समय व्यवस्थापन गरेर चल्यौं । म पनि एनजिओको काममा धेरै खटिनुपथ्र्यो । उहाँ संविधान सभाको सभासद बन्दा पनि मैले धेरै समय दिन पाइनँ । उहाँ आफ्नो कामका कारणले अरुलाई टर्चर दिनुहुन्थेन । आफैं योजना बनाउने, परिचालन गर्ने र कार्यान्वयन पनि आफैं गर्ने खालको मान्छे हो, उहाँ । उहाँले कहिल्यै यसो गर भनेर भन्नुभएन । म आफैं देखेर मैले यो काम गर्छु है भनेमात्रै हुन्थ्यो । बेलाबेलामा पोखरा चाहिँ भ्याएसम्म जानु है भन्नुहुन्थ्यो ।
त्यसपछि मेरो निरन्तर शैक्षिक क्षेत्र भयो, उहाँको राजनीतिक । त्यसो भएपछि क्यालेन्डर पनि मिल्थेन । यता कार्यक्रम पनि मिलिरहेको हुन्थेन । जान पनि भ्याउँदिनथें । कहिल्यै गुनासो गर्नुभएन । मैले पनि तनाव दिने, मलाई समय दिनुभएन भनेर कहिल्यै भनिनँ । ‘विद्या, पब्लिक जीवन चाहिँ व्यक्तिगत हँुँदो रहेनछ,’ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ।
म कुनैबेला सक्रिय राजनीतिमा थिएँ । संगठन र पार्टीमा क्रियाशील थिएँ । राजनीतिलाई अहिले पनि नजिकबाट हेरिरहेकी छु । तर, अहिले पीडा भुल्नै सकेकी छैन ।
यो बेला मैले धेरै पछिसम्म सोच्न सकिसकेकी छैन । विभिन्न मिडियाले चर्चा गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिमा सक्रिय हुनेबारे मैले अहिलेसम्म केही सोचिसकेकी छैन । परिवारसँग पनि सरसल्लाह भइसकेको छैन । अहिले त्यो विषयमा नबोलौं, बोल्नै पनि परिस्थिति आएछ भने, त्यो बेला बोलौंला ।
रवीन्द्र योजनाकार हो
मैले चिनेको रवीन्द्र अधिकारी योजनाकार हो । योजना बनाउन कुनकुन ठाउँबाट, कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने मान्छे । धेरै मलाई मान्छेले यसो भनेछन्, यसो गरेछन्, फलानोले यस्तो भन्यो, उस्तो भन्यो भनेर बहकिने मान्छे होइन उहाँ ।
आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न आलोचना, आरोप र अवरोधबाट नरोकिने मान्छे हो, रवीन्द्र अधिकारी । यसलाई चुनौतीको रुपमा लिने हो, अल्झिएर बस्ने, कामै नगर्ने भन्ने होइन अवसर र अरु लक्ष्य चुम्ने आधार खोज्नेतिर लाग्ने हो भन्ने उहाँमा थियो । कहिलेकाहिँ उहाँले चुनौतीलाई बेवास्ता पनि गर्नुहुन्थ्यो । बाधाका रुपमा होइन चुनौतीलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भन्ने थियो । मैले बुझेको रवीन्द्र अधिकारी, हरेक कुरालाई सहज रुपमा लिने त्यसलाई कसैले असहज बनायो भने बेवास्ता गरिदिने मान्छे हो ।
म समाजशास्त्रकी अध्यापक पनि हुँ । हाम्रो समाज किन सकारात्मक भएन भनेर उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्थ्र्यो । जेमा पनि समस्या नै देख्ने यो अविकसित देशको विशेषता नै हो क्या हो विद्या भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । हाम्रो सोचहरु परम्परागत छन्, काम चलाउ छन् । हामी होइन पनि काम चलाउभन्दा माथि उठ्न सकेनौं, प्रभावकारी हुन चाहँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो ।
इमान्दार त उहाँ हुँदै हो । जनताको जीवन सम्पन्न र समृद्ध भनेर सोच्ने मान्छे हो । उहाँ जहिल्यै पनि अरुको करिअरको चिन्ता गर्ने मान्छे हो । मेरै विषयमा पनि हामी धेरै घुम्न हिँड्दैनथ्यौं, हामी श्रीमान श्रीमती हुँदा पनि साथी थियौं । फोन पनि त्यही धेरै गफ हुँदैनथ्यो । तर, हामीबीच समझदारी थियो, विश्वास थियो । एकअर्काप्रति असाध्यै प्रेम थियो । एकअर्कामा रेस्पेक्ट र अर्काको कामलाई दखल पुर्‍याउँदैनथ्यौं । मेरो आज यस्तो छ, भ्याउँछौ कि भ्याउँदैनौं भन्नेबाट होइन आज तिम्रो के काम छ भन्नेबाट हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो । समस्यामा अल्झिएर, रन्थनिएर बस्ने मान्छे होइन उहाँ ।
आफू दुखेर अरुलाई हँसाउने मान्छे
मैले पारिवारिक रुपमा अभाव महसुस कहिल्यै गरिनँ । हाम्रो बिहे हुँदा भाइहरु आर्थिक हिसाबले बलियो भइसक्नुभएको थियो । घरमा आमाले भन्नुहुन्छ, उसले हिजो सानोमा धेरै पारिवारिक समस्या खेपेको छ । राजनीतिक सहयात्रामा पनि उहाँले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समस्या खेप्नुभयो ।
पारस शाहविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्दा म पनि आन्दोलनमा हिँडें । तर, त्यत्रो ५ लाख हस्ताक्षर गर्दा काहीँनेर समस्या घरमा बताउनु भएन । फलानो ठाउँमा यस्तो कार्यक्रम हुँदा फलानो ठाउँमा जानु है भन्नुहुन्थ्यो । अर्को ऋतिक रोशन काण्ड पनि घट्यो । त्यतिबेला म पोखरामा थिएँ, उहाँ काठमाडौंमै । त्यतिबेलाको काण्डमा उहाँ झन्डै मारिनुभएनछ तर मलाई भन्दै भन्नुभएन । कार्यक्रममा गोली नै चल्दा अरुले दाइ भाग्यले बाँच्नुभयो भनेर बताउँदा उहाँले भन्नुहुन्थेन । उहाँले सामान्य हो, चिन्ता मान्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो ।
राम्रा कुरा बताउने तर समस्या बताएर भरसक अरुलाई टर्चरमा राख्ने मान्छे होइन उहाँ । २०६२-०६३ को आन्दोलनमा चाहिँ उहाँ पोखरा हुनुहुन्थ्यो म काठमाडौं । उहाँ जेल नै पर्नुभयो । त्यतिबेला पनि मैले पछिमात्रै थाहा पाएँ । मैले थाहा पाइहाले ठिकै छ नत्र समस्या बताएर अरुलाई तनाव दिनुहुँदैन भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो । उहाँ आफू दुखेर अरुलाई हँसाउने मान्छे ।
देश परिवर्तनको सपना
मैले चिन्दादेखि नै उहाँ देश परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सपना देख्ने मान्छे हो । सांसद भइसकेपछि पनि जनताको हामीप्रति अपेक्षा धेरै छ त्यसैले काम पनि धेरै गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो । समृद्ध नेपालको परिकल्पना थियो । त्यही विषयमा किताबसमेत लेख्नुभयो ।
समृद्ध नेपाल निर्माण र आर्थिक रुपमा निर्भर राज्य निर्माण गर्ने, कुन कुन क्षेत्रले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्छ भनेर खोजी हुनुपर्छ भनेर लाग्नुहुन्थ्यो । ३ पटक सांसद बनिसकेपछि यसपालि त पक्कै मन्त्री बनाउँछन् भन्ने हल्ला थियो । तर, पर्यटनमन्त्री नै बनाउँछन् भन्ने थाहा थिएन । लेखा र विकास समितिको सभापति पनि भइसकेकाले अर्कै मन्त्रालय पर्छ कि भन्ने थियो, पर्यटन मन्त्रालय प¥यो । विकासप्रेमी नेतालाई पर्यटन मन्त्रालय सुहाउँदो पनि थियो । पोखराबाट भएकाले पनि पर्यटन स्वाभाविक पनि हो ।
कार्ययोजना बनाइरहँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयमा कुरा आउँदा छलफल गर्नुहुन्थ्यो । मलाई कहलिेकाहीँ कार्ययोजना हेरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ निरन्तर देश परिवर्तन र विकास निर्माणकै पक्षमा योजना बनाउँदै, कार्यान्वयनमा लैजान खटिनुभयो । समृद्ध नेपालको सपना देखिरहनुभयो ।
छोराहरुले सकेजति पढुन्
उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, मैले पिएचडी गरोस् । मेरो पिएचडी अलि ढिला भयो भन्ने लाग्थ्यो उहाँलाई । अलि पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो भन्ने थियो । उहाँको पहिलो प्राथमिकता नै शिक्षामा थियो ।
मान्छे स्किलफुल हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मनसाय थियो । सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता हाँसिल गरेपछि अरु अवसरका बाटो खुल्छन् भन्ने उहाँको भनाइ थियो । जर्नलहरु लेख, किताब निकाल भन्नुहुन्थ्यो । प्राज्ञिक र बौद्धिकता विकासलाई प्राथमितामा राख्नुहुन्थ्यो । बच्चाहरुको हकमा पनि त्यही हो, उनीहरुलाई धेरैभन्दा धेरै पढाउने । विज्ञता हाँसिल गरेपछि अवसर आफैं आउँछ भन्नुहुन्थ्यो । त्यही सपनाअनुसार छोराहरुको भविष्यका लागि लाग्नेछु ।
वाइडबडीबारे सोधेकी थिएँ
लेखा समितिदेखि पर्यटनमन्त्रीसम्म आइपुग्दा विकास योजना, उहाँका सपनाका विषय सल्लाह हुन्थो । पछिल्लो समय मेरो कलेज साँझ थियो । आज उहाँलाई दिनभरि समय दिन्छु भनेर बस्थें । म उहाँसँग क्वाटरमा सँगै बसें । जनतासँग सम्बन्ध हुने भएकाले पनि म त्यो मेन्टेन गर्नका लागि क्वाटर बस्थें । मैले पूरै समय दिन्थें, हाम्रो धेरै सल्लाह हुन्थ्यो ।
पर्यटनमन्त्री हुँदा हामीबीचमा धेरै नै कुरा सेयरिङ हुन्थ्यो । जतिबेला सम्पति विवरण सार्जननिक भयो त्यहाँदेखि नै उहाँलाई विवादमा पारियो । हाम्रो बीचमा कुरा हुन्थ्यो । किन यस्तो भइरहेको छ भनेर छलफल हुन्थ्यो । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, गल्ती नगरेपछि डराउनु पर्दैन । कति मिडियालाई चित्त पनि दुखाएँ हुँला । समय दिन पनि नसकेको हुँला । तीन–तीनपटक मैले चुनाव जितिसकें । राजनीतिमा एक खालको प्रतिस्पर्धी पनि हुँदा रहेछन् । मान्छेले भनेका कुरामा किन भइरहेको छ भनेर कुरा गर्थें । पब्लिक जीवन भएपछि कतिपय कुरा गल्ती नभए पनि आरोप लाग्छन्, पीर नगर भन्नुहुन्थ्यो ।
वाइडबडीको सन्दर्भमा मैले एक दिन सोधेकी थिएँ । तपाईंले केही गर्नुभएको भए मलाई नढाँट्नुुस् भनेकी थिएँ । उहाँले कहाँनेरबाट मैले त्यस्तो गर्न सक्छु भन्नुहुन्थ्यो । जबकि सबै प्रक्रिया अगाडि नै चलिसकेको छ । न मैले काहीँ हस्ताक्षर गरेको छ न कहीँ निर्देशन दिएको छु । यतिमात्र हो कि अन्तिम किस्ता नबुझाएको भए जहाज आउने थिएन,’ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो । पटक–पटक सोध्नु राम्रो हुँदैन । म आफैं विश्वस्त थिएँ, यो सबै आरोप हो, आक्षेप हो ।